i3wm 4.19 rave kuwanikwa uye aya ndiwo matanho akanyanya kukosha | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yaburitswa kubva kumahwindo maneja i3wm 4.19 uye mune iyi vhezheni itsva kugadzirisa kwakawedzerwa kune iyo i3bar pani iyo yatove inoshandisa kuitisa maitiro ekutanga natively, pamwe nerutsigiro rwekufananidza zvinongedzo uye nezvimwe.
Kune avo vasingazive nezve i3wm vanofanirwa kuziva kuti uyu maneja wehwindo akagadzirirwa X11, rakafemerwa ne wmii uye rakanyorwa mumutauro weC programming. Iyo i3wm chirongwa Yakagadzirwa kubva pakutanga mushure mekuteedzana kwekuyedza kubvisa hurema hwewmii windows maneja. I3wm inosiyaniswa nekodhi inoverengwa zvakanaka uye yakanyorwa, inoshandisa xcb pachinzvimbo cheXlib, inonyatso tsigira masisitimu mazhinji ekutarisa, inoshandisa zvimiro zvemiti-senge dhizaini yekumisikidza hwindo, inopa IPC interface, inotsigira UTF-8, uye inochengetedza mashoma windows dhizaini.
Inotsigira kupindirana uye kuronga mawindo, inobata zvine simba. Kugadziriswa kunogadziriswa kuburikidza neyakajeka mameseji faira, uye i3 inogona kuwedzerwa ichishandisa yayo Unix Socket uye JSON-based IPC interface pamwe nemazhinji mapurogiramu mitauro.
I3 inopa zvakanakira kushandisa tile windows maneja pasina kunetseka kwekunyora marefu uye dzimwe nguva kunokanganisa zvinyorwa zvekumisikidza. I3wm inoshandisa yakajeka mavara gadziriso faira.
Iyo projekiti kodhi inoparadzirwa pasi peBSD rezinesi.
1 Main nyowani maficha eI3wm 4.19
2 Maitiro ekuisa i3wm pane Linux?
Main nyowani maficha eI3wm 4.19
Mune ino vhezheni nyowani yeI3wm 4.19 pani i3bar inoshandisa maitiro ekutanga nekudana exec pasina kushandisa raira shell.
Kana uchigadzirisa mabhatani, mahukama ehukama anobatanidzwa, Uye zvakare, iyo "isiri yepuraimari" sarudzo yakawedzerwa kune zvakabuditswa kune echipiri skrini.
Zvakare, mu i3wm 4.19 yakawedzerwa tsigiro yezviratidzo zvekufananidza kana uchitsvaga nzira dzefaira mumenyu (i3-dmenu-desktop) uye nzira dzekumisikidza "tiling_from" uye "floating_from" windows zvakawedzerwawo.
Iyo Rofi hwindo switch inogadzirirwa nekukanganisa mune yekumisikidza faira.
Yakawedzerwa rutsigiro rweppt tsika (muzana) mune chinzvimbo uye gwara rairo, pamwe nerutsigiro rwekupa mepu isina chinhu semakirasi uye misoro.
Nezve mabugs akagadziriswa Mune iyi vhezheni itsva, tinogona kuwana zvinotevera:
Yakagadziriswa eh i3bar Xorg ndangariro inodonha, pamwe nekukanganisa kana uchimira / kutangazve chirongwa che slash uye zvisingaenderane neJSON yekuisa.
Izvo zvakare zvave kugona kuti ubate kubata zvakapindirana kushongedzwa nenzira kwayo
Nzvimbo dzekushandira nzvimbo mukati me INT32_MAX inogumira
Yakagadziriswa bhagi nekugadzirisa saizi mukati memudziyo unoyangarara
Mouse resizing ikozvino inogona kubatwa nemazvo mune yakazara skrini skrini
Gadzirisa mune yakatumidzwa nzvimbo yekushandira miganho pane zvinobuda shanduko
Fixed monitor switching panguva kana i3 reboot inofamba
zvirimo zvezvinhu zvisipo zvekuburitsa midziyo
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani kuburitswa kwe i3wm, unogona kutarisa ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa i3wm pane Linux?
Kune vese zvavari Debian, vashandisi veUbuntu kana chero chimwe chinobva pane izvi zvekugovera, ingovhura terminal pane yako system uye mairi unongofanidza kunyora unotevera kuraira:
Panguva yenyaya ye Arch Linux, Manjaro, Arco Linux kana chero imwe distro iyo yakavakirwa paArch Linux, Ivo vanogona kuisa kubva kune chinongedzo nekukopa zvinotevera mukati mayo:
Iye zvino kune avo vari kushandisa Fedora kana chero kumwe kugovera kunoenderana neizvi, ivo vanongofanira kunyora zvinotevera mune chinouraya:
Pakupedzisira kune chero ani VhuraSUSE vashandisi mune chero eayo desktop desktop, ivo vanofanirwa chete kunyora zvinotevera mune chinouraya:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » i3wm 4.19 rave kuwanikwa uye aya ndiwo matanho akanyanya kukosha
Librem 5 yapinda mudanho rekugadzira
Ubuntu Web inoburitsa yekutanga test ISO. Chrome OS haisisiri yega